Facebook အကောင့်ဖွင့်နည်း အသစ် သတိ ဖုန်းမလို... ~ Myawady News
Facebook အကောင့်ဖွင့်နည်း အသစ် သတိ ဖုန်းမလို...
2:51 PM နည်းပညာ2comments
မင်္ဂလာပါဗျာ...ကျွန်တော်ကောင်းခန်.ပါ ဒီနေ.မြန်မာပြည်လူငယ်ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ.တင်ပေးချင်တာကတော့ facebook အကောင့်ဖွင့်နည်းအသစ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ကျန်ခဲ့တဲ့ ပို.စ်တွေမှာလဲ ကျွန်တော် တင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ ဒီနည်းလေးကတော့ လူသိပ်မသိသေးတဲ့ နည်းလမ်းအသစ်လေးမို. ပါ ....ကဲ့စလိုက်ကြရအောင်ဗျာ
အရင်ဆုံး ဒီပို.စ်လေးအတွက် Computer and mobile4u မှ Sai DaiHack ကိုဒီနေရာကနေကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါရစေဗျာ...ပထမဆုံးကျွန်တော်တို. facebook အကောင့်ဖွင့်ဖို.အတွက် email တစ်ခုလိုအပ်ပါမယ် အခု နည်းက google ကနေသွားပြီးတော့ google mail နဲ.ဖွင့်ရတာမဟုတ်ပါဘူး http://www.mail.com/int/ ဆိုတဲ့နေရာကိုအရင်ဝင်လိုက်ပါ...
ပြီးရင်လိုအပ်တာလေးတွေအကုန်ဖြေပေးပါ ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာက email လိပ်စာမှာ ရွေးချယ်ခွင့်အများကြီး သူကပေးထားပါတယ် ဥပမာ မိမိနံမည်@linuxmail.org တို. @cyberservices.com တို. @webname.com တို.လိုမျိုး နံမည် လန်းလန်းလေးတွေနဲ. ရမှာပါ မှတ်ရလွယ်တာတော့ ရွေးပေါ့နော်.... ပြီးသွားရင်တော့ I Accept.Create My Account ဆိုတဲ့ အစိမ်းရောင်လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ မှားနေရင်တော့ မှားနေတဲ့နေရာပြန်သွားပြင်လိုက် ဒါဆို အိုကေပြီ နော် facebook က ခွင့်ပြုတဲ့ email တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ပြီလို.ယူဆလို.ရပါပြီ အခု ဖွင့်တဲ့mail နဲ.ပက်သက်လို.တော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲလေ့လာဆဲ ဖြစ်လို. တခြား အားနည်းချက်အားသာချက်တွေတော့ဘာမှမသိသေးပါဘူးဆိုတာလဲ ကြိုတင်ဝန်ခံပါရစေဗျာ။ အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ အကောင့်ကိုပြန်မထွက်ပဲ ပုံမှာပြထားတဲ့နေရာလေးကနေ facebook အကောင့်သစ်ဖွင့်မယ်ဗျာ sing up လုပ်လိုက်ပါ
အကောင့်စဖွင့်ဖို. facebook home page ကျလာလိမ့်မယ် ပုံမှန်ဖွင့်နေကြအတိုင်းပဲ ဖြည်.ပါ email နေရာမှာတော့ ခုန ဖွင့်ထားတဲ့ email လိပ်စာ နှစ်ခါရိုက်ထည်.ပေးရပါမယ် ပြီးသွားရင်တော့ Create My Account သာရဲရဲ နှိပ်ချလိုက်ပါ မွေးနေ.မွေးလ မွေးရက်ကိုတော့ facebook နဲ. email တူတူ ပဲထည်.ပေးပါ နံမည်ကို လဲ မြန်မာ အက္ခရာနဲ. အသုံးပြုခြင်း ရှောင်ကျဉ်ပါ facebook အကောင့်အသစ်တစ်ခု ဖုန်းနံပါတ်မလိုပဲပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ။ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီဆိုလို. မပြီးသေးပါဘူး ဆက်လျှာရှည်အုံးမှာပါ ..တကယ်လို. အကောင့်မပွင့်ပဲ ဖုန်းနံပါတ်တောင်းနေမယ်ဆိုပါက အစကနေပြန်စလိုက်ပါ အခုထိကျွန်တော်စမ်းသပ်ပြီးသလောက်တော့ ဘာ error မှမတွေ.သေးပါဘူး တကယ်လို. error တစ်စုံတစ်ခု တွေ.ရှိပါက အောက်က comment box မှာသာပြောခဲ့ပေးပါ တခြားစာဖတ်သူများလည်လေ့လာနိုင်အောင်ပါ ။facebook ဖွင့်တာအောင်မြင်သွားပြီဆိုပါစို. ပထမအဆင်အနေနဲ. email ထဲက fri ရှာခိုင်းတယ်ဗျာ skip နှိပ်ပြီးကျော်လိုက်ပါ ဒါဆိုရင် အောက်ကပုံလေးလို မြင်ရမယ်ဗျာ
ပြီးသွားရင်တော့ Save ပေါ့ ဒါဆိုအကောင့်ပွင့်သွားပါပြီ email ထဲမှာ facebook ကပို.လိုက်တဲ့ mail နှစ်စောင်ရောက်နေပါတယ် အောက်က ပုံမျိုးပါတဲ့မေးလ် ကိုရှာပါ ပြီးရင်တော့
Confirm Your Account ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ ဒါဆိုရင် New Tab တစ်ခုနဲ. facebook အကောင့်ပွင့်လာပါမယ် ဒါဆို သင့်အကောင့်ဟာ Confirm ဖြစ်သွားပါပြီ ခုန request လုပ်ခဲ့သမျှ Like လုပ်ခဲ့သမျှ အလုပ်စလုပ်ပြီလို.ပြောလို.ရပါပြီ သင့်အကောင့်စသုံးလို.ရသွားပါပြီ .........အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေဗျာ ..............................
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးကတော့ အခုဖွင့်လိုက်တဲ့ email အကြောင်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမသိသေးတဲ့အတွက် ဘယ်လိုerror မျိုးတွေကြုံလာမယ်ဆိုတာ မပြောနိုင်တဲ့အတွက် မိမိတို.facebook အကောင့်တွေကို gmail တစ်ခုနဲ.ပါ ထပ်ချိတ်ထားစေချင်ပါတယ်
kminn lay January 9, 2014 at 2:51 PM
Your registration could not be processed at the moment. Please try again later. လို့ပေါ်နေတာ try လို့မရပါဗျာ
Lonely Boy February 1, 2014 at 12:33 PM
မရပါဗျာ facebook အကောင့်တစ်ကောင့်လောက် အရေးတကြီးသုံးချင်လို့ ပါ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ အကောင့် က name ပြောင်းလို့မရတော့လို့ပါ
အမေရိကန်အမျိုးသမီး Lisa Sparks ဟာ အမျိုးသား ၉၁၉ ယောက်နဲ့ တရက်အတွင်းမှာအိပ်ပြီး စံချိန်သစ်တင်လိုက်ပါတယ်။ (နာမည်က မြန်မာစကားလုံးနဲ့ ဆို...
Virginity (1) အပျို တကယ်စစ်ပါတယ် (အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
ဆရာရေးတဲ့ (လူပျိုဖြစ်ပြီ) မှာ ရေးထားတဲ့ နို့သီးဝိုင်းဟာ ပန်းရောင်၊ အညိုရောင် မတူကြဘူး။ အပျိုစစ် နေသ၍ (ကိုယ်ဝန် မဆောင်ဘူး သေးချိန်အထိ...
အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် အင်္ဂလန်နိုင်ငံသူ Hazel Jones ဟာ အမျိုးသမီး အင်္ဂါနှစ်ခု ၊ သားအိမ် နှစ်ခု ၊ သားအိမ်ပြွန် နှစ်ခု ပါရှိပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်...
အမျိုးသမီးများ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဆန္ဒဖြေဖျောက်ခြင်းရဲ့ အကြောင်း
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ ဆရာရှင့် ကျမ အခု ရောဂါတခု ခံစားနေရလို့ စိတ်ပူလို့ ဆရာ့ကို မေးတာပါ၊ ရင်ဖွင့်တာပါရှင့်။ ကျမ အသက်က ၃၂ နှ...
စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် အသက်(၁၁)နှစ်အရွယ် မယားပါသမီး ရေချိုးနေတာကို လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့ မှတ်တမ်းတင် ခိုးရိုက်ကူးထားခဲ့ကာ ထိုဖုန်းမှတဆင့် thumbdrive ...
မိုးဟေကို ရဲ့ လှပသောဓာတ်ပုံလေးများ
သားမယားအဖြစ်နေထိုင်ဆက်ဆံခဲ့စဉ်က ရိုက်ကူးခဲ့သည့် ဗီဒီယိုအင်တာနက်တွင် တင်သူအား မကွေးရဲတပ်ဖွဲ့အရေးယူ
သားမယားအဖြစ် နေထိုင်ခဲ့စဉ်က ရိုက်ကူးခဲ့သည့် ဗီဒီယိုခွေအား အင်တာနက်တွင် တင်မည်ဟု ဆိုကာ ကာယကံရှင် မိန်းကလေး ထံသို့ပေးပို့ပြီး အင်တာနက်တွင် အ...
၁၃ နှစ်အရွယ် ကျောင်းတက်ဖော်ကောင်မလေး မသိအောင် အတူနေ ဗီဒီယိုရိုက်ပြီး အွန်လိုင်း တင်ခဲ့ သည့် ကျောင်း သားအကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ထ...
လွန်ခဲ့တဲ့ ( ၈ ) နှစ်ကျော် ( ၉ ) နှစ် ခန့်အချိန် က .... ဖြစ်ပါတယ်... သူမလေး ရဲ့ နာမည် က ( ....... ) ပါတဲ့ .... အသားညိုညို ၊ မျက်လုံး လှလှ ၊...
Thun Sett သွန်းဆက် ရဲ့ ရေလည်ဟော့တဲ့ဓာတ်ပုံများ
Celebrity Talk (33)
Myanmar Model (54)
သောက်ရေအိုးမှ ရေ သံသယဖြစ်၍ ဓာတ်ခွဲခန်းပို့စစ်ဆေး
ယခုအောက်တိုဘာလတွင် ငွေကျပ်(၁၅၀၀)တန် တန်ဖိုးနည်း မု...
ဘေးကင်း လုံခြုံ၊ ယုံကြည် စိတ်ချ ရပြီး ရှစ် နာရီ ခရ...
အိမ်တွင်းဖြစ် သဘာဝ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေး များ
နိုင်ငံခြား ခရီးသွားများနှင့် ပြည်ပရင်းနှီး မြှုပ်...
မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅...
Burma News Group
မြ၀တီ - မြ၀တီ - သတင်းစုံသည် မှန်သည် မြန်သည် အားလုံးအတွက် မြ၀တီ
Myanmar ICT News | Myanmar ICT News
ဗွိတိသြှကောငျစီမှ ပွတိုကျပညာရှငျမြားအတှကျ “စုဆောငျးပစ်စညျးစီမံခနျ့ခှဲခွငျးပညာရပျ” သငျတနျးပေးမညျ။
Lamin Maung (နည်းပညာ နှင့် အထွေထွေ ဗဟုသုတ)
မြ၀တီ - မြ၀တီ - ပြည်းတွင်းနည်းပညာ
Copyright © 2012 Myawady News | Powered by Blogger